नियुक्त भएको १२ घण्टा नबित्दै किन दिइन् स्वीडेनकी महिला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा ? « Sansar News
नियुक्त भएको १२ घण्टा नबित्दै किन दिइन् स्वीडेनकी महिला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा ?
९ मंसिर २०७८, बिहीबार १३:१४
काठमाडौं । स्विडेनकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री म्याग्डलेना एन्डर्सनले १२ घण्टा नबित्दै पदबाट राजीनामा दिएकी छिन् । सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीकी नेतासमेत रहेकी एन्डर्सनले नियुक्त भएको १२ घण्टाभित्रै राजीनामा दिएकी हुन् । गठबन्धन सरकारको साझेदार रहेको ग्रिन पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि एन्डर्सनको राजीनामा आएको हो ।
यही बुधबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी एन्डर्सनको राजीनामासँगै स्विडेनमा राजनीतिक अन्याेलमा परेको समाचारमा उल्लेख छ । तर उनले सभामुखलाई एकल पार्टी नेतृत्वको सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने अपेक्षा गरेको पनि बताइन् ।
‘मैले सभामुखलाई प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त गर्न भनेकी छु’,उनले भनिन्,‘म एकल पार्टीको नेतृत्वको सोसल डेमोक्रेट सरकारको नेतृत्व गर्न तयार छु ।’
गठबन्धन सरकारद्वारा ल्याएको बजेट संसदबाट अस्वीकृत भएपछि ग्रिन पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीका लागि संसदमा हुने चुनावमा एन्डर्सनको पक्षमा मतदान गर्ने उक्त पार्टीले प्रस्ट पारेको छ ।
वामपन्थी दल लेफ्ट पार्टीले एन्डर्सनलाई मतदान गर्ने बताए पनि सेन्टर पार्टीले मतदानमा सहभागी नहुने बताएका छन् । विगत सात वर्षदेखि अर्थमन्त्री रहँदै आएकी ५४ वर्षीया एन्डर्सनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । स्विडेनमा महिलाले मतदान गर्ने अधिकार पाएको सय वर्षपछि उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो ।